၁. ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း
၄. နှာပိတ်ခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း
၇. ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲ မအီမသာဖြစ်ခြင်း
၉. ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း
၁၁. အနံ့ (သို့) အရသာ ပျောက်ခြင်း
၁၂. ကယောင်ကတန်းဖြစ်ခြင်း (သို့) သတိမေ့မျောခြင်း
၂.၁. COVID-19 အတည်ပြုပြီး (သို့) COVID-19 ကူးစက်မှု လက္ခဏာ ရှိသည့် လူနာများ
•ရောဂါလက္ခဏာ ပြသည့်နေ့ မှ စ၍ ၁၀ မှ ၁၄ ရက် အထိ (သို့) ရောဂါလက္ခဏာများ ပျောက်သည့်နေ့မှ စ၍ အနည်းဆုံး ၃ ရက် သီးသန့် ခွဲထားပါ
ပိုးရှိသော်လဲ ရောဂါလက္ခဏာ မပြသော လူများ (COVID-19 လူနာ နှင့်အတူနေ မိသားစု၀င်များ (သို့) COVID-19 လူနာနှင့်ထိစပ်မှုရှိသူများ)
•မိမိဘာသာ ၁၀ ရက် သီးခြားခွဲနေပါ
၂.၂.ဆိုးရွားသောအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လူနာအုပ်စုများ
၁. အသက် ၆၅ နှစ် နှင့် အထက်
၂. နာတာရှည် ရောဂါရှိသူများ - ဆီးချိုသွေးတိုး ရောဂါ၊ နှလုံး ရောဂါ၊ အဆုပ်ပွ ရောဂါ ကျောက်ကပ် ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ အာရုံကြောရောဂါ ( ဥပမာ၊ လေဖြတ် လေဖြန်း ပါကင်ဆန်ရောဂါ)။
၃. ခုခံအားကျဆင်းနေသော လူနာများ - အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုး ရှိသူ၊ ကင်ဆာ ရောဂါရှိသူ၊ အသည်း(သို့) ကျောက်ကပ် အစားထိုးထားသူ၊ သွေးရောဂါရှိသူများ
၄. ဆေးလိပ် သောက်သူ
•COVID ပိုးစစ်ခြင်း - ဥပမာ Rapid Diagnostic Test (RDT)၊ GeneXpert® နှင့် RT-PCR အသုံပြု၍စစ်ဆေးပါ။
•သွေးစစ်ခြင်း - ဥပမာ FBC (full blood count), Complete picture, Random blood glucose, Renal function test (Urea, electrolytes, creatinine), Crp, Ferritin, LDH, d-dimer, ABG
•ရင်ဘတ် ဓာတ်မှန် (CXR) (သို့မဟုတ်) CT scan
•သွေးလွန်တုပ်ကွေး နှင့် ငှက်ဖျား ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ (သံသယ ရှိလျှင် စစ်ဆေးပါ)
၄. ၁. အပျော့စား
•ဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင် ရောဂါ (သို့မဟုတ်) ရောဂါ လက္ခဏာအပြင်းများ မပြသော သံသယလူနာများ
•ရောဂါလက္ခဏာရှိသော်လဲ မောခြင်း နှလုံးတုန်ခြင်း ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း မရှိသော လူနာများ (သွေးထဲရှိ အောက်စီဂျင် Level ၉၅% နှင့်အထက်၊ တစ်မိနစ် သွေးခုန်နှုန်း ၉၀ အောက်၊ တစ်မိနစ် အသက်ရှူနှုန်း ၂၀ အောက်)
•NEWS2 score <၂ (ဇယား ၁ တွင်ကြည့်ပါ)
•ပိုပြင်းထန်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ လက္ခဏာ များပြသော လူနာများ (အဖျားကြီး ၍ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ မောခြင်း၊ အသက်ရှူ နှုန်း အလွန်မြန်ခြင်း)
•သွေးထဲရှိ အောက်စီဂျင် Level ၉၃-၉၄% နှင့်အထက်၊ တစ်မိနစ် သွေးခုန်နှုန်း ၉၁-၁၂၀ အောက်၊ တစ်မိနစ် အသက်ရှူနှုန်း ၂၁.၂-၂၄ အောက်
•NEWS2 score ၃-၄ (ဇယား ၁ တွင်ကြည့်ပါ)
•ပိုပြင်းထန်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ လက္ခဏာ များပြသည် လူနာများ (အဖျားကြီး ၍ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မောခြင်း၊ အသက်ရှူ နှုန်း အလွန်မြန်ခြင်း)
•သွေးထဲရှိ အောက်စီဂျင် Level ၉၃% နှင့်အထက်၊ တစ်မိနစ် သွေးခုန်နှုန်း ၁၂၀ အောက်၊ တစ်မိနစ် အသက်ရှူနှုန်း ၃၀ အောက်
•NEWS2 score ၅ (သို့မဟုတ်) အထက် (ဇယား ၁ တွင်ကြည့်ပါ)
၄. ၄. အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေ
• အဆုတ် လုံး၀ အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း
•ရောဂါပိုးကြောင့် သွေးပေါင် အလွန်အမင်းကျခြင်း
ဇယား ၁ NEWS (National Early Warning Score )
A alert, V response to verbal, P response to pain, U unresponsiveness
၅. ရောဂါ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ခြင်း
ကိုယ်ပူချိန် သွေးပေါင်ချိန် သွေးထဲ ရှိ အောက်စီဂျင် တိုင်းခြင်း များကို အနဲဆုံး တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ် လုပ်ဆောင် ရပါမည် ။ ရောဂါဖြစ်ပြီး ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း ရောဂါ အခြေအနေ ဆိုးလာနိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးဆုံး လက္ခဏာမှာ သွေးထဲတွင် အောက်စီဂျင် ကျဆုံး၍ အောက်စီဂျင် ပိုလိုအပ်လာခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၆.၁.အပျော့စား COVID-19 လူနာများ
အာဟာရပြည့်၀သော အစားအစာများစားပါ၊ ဓာတ်ဆားရည် (သို့) ရေများများသောက်ပါ။ ဖျားလျှင်အဖျားပျောက်ဆေး ချောင်းဆိုးလျှင် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးသောက်ပါ။
၆.၂. ပြင်းထန်သော COVID-19 လူနာများ
တစ်မိနစ်လျှင် ၃-၅ လီတာ (Nasal Prong) မှ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ (Venturi Mask or Face Mask with reservoir)။
- ဘက်တီးရီးယား ပိုး၀င်သည်ဟု သံသယရှိပါက ပိုးသတ်ဆေးပေးနိုင်ပါသည် (Augmentin 625mg တစ်နေ့သုံးကြိမ် (၅ ရက်မှ ၇ ရက်)၊ Azithromycin 500mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ် (၃ - ၅ ရက်))။
၆.၂.၃. Steroids ဟော်မုန်း
• အောက်စီဂျင်မပါဘဲ အသက်ရှူစဥ် သွေးတွင်းရှိအောက်စီဂျင် ၉၃%အောက် (သို့) အောက်စီဂျင်ပေးထားရသော ရောဂါပြင်းထန်သည့် လူနာများအတွက် ဟော်မုန်း ပါသောဆေးများ သုံးသင့်သည်။
•ဆေးညွှန်း - Dexamethasone6mg တစ်နေ့တစ်ကြိမ် (IV (သို့) သောက်ဆေး) ကို ၇-၁၀ ရက်အသုံးပြုပါ။
•Steroids ဟော်မုန်း ပါသောဆေး ကို COVID-19 ကာကွယ်ရန် (သို့မဟုတ်) အပျော့စား မှ အလယ်အလတ် COVID-19 အောက်ဆီဂျင်မလိုသော လူနာများအတွက် မသုံးသင့်ပါ။
•အကယ်၍ Dexamethasone မရှိပါက ဤဆေးနှင့် ပမာဏနှင့်ညီမျှသော - Prednisone 40mg (နေ့စဉ်တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ်ခွဲ ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်) ၊ Methylprednisolone 32mg (နေ့စဉ်တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ်ခွဲ ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)) (သို့) Hydrocortisone 160mg (နေ့စဉ် နှစ်ကြိမ် မှ လေးကြိမ်ခွဲ ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်)။
Steroids ပါ၀င်သောဆေးများကို ၁၀ ရက်အသုံးပြုရပါမည်။
၆.၂.၄. Remdesivir အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောလူနာ
•အကောင်းဆုံးကတော့ Remdesivir လိုအပ်သောလူနာများကိုဆေးရုံတင်သင့် ပါသည်။
•COVID-19 ရောဂါ အတည်ပြုပြီး သောလူနာများ ကိုအောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီ လျှင် Remdesivir သုံးနိုင်သည် -
- အသက် ၁၈ နှစ် နှင့်အထက် ဖြစ်ရမည်
- ရောဂါလက္ခဏာပြပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း
- အဆုတ်ရောင်နေခြင်း (သို့မဟုတ်) ရင်ဘတ် ဓာတ်မှန် (CXR)/CT scan တွင် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ တွေ့လျှင်
- သွေးတွင်းရှိ အောက်စီဂျင် ၉၃% အောက်ရောက်နေပြီး အောက်စီဂျင် ကုထုံးပေးရန်လိုအပ်နေသူ
- ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလိုဂရမ် နှင့် အထက်ရှိသူ
•ဆေးညွှန်း - ပထမဆုံး နေ့တွင် ၂၀၀ မီလီဂရမ် IV ထိုးပြီးနောက် ၁၀၀ မီလီဂရမ် IV ကို ၄ ရက် ဆက်တိုက် ထိုးပါ (*ဆေးမထိုးမှီ နှင့်ဆေး ထိုးစဥ် အတွင်း အသည်း နှင့် ကျောက်ကပ် ကောင်းမကောင်းကို သွေးစစ်၍ စစ်ဆေးသင့်သည်)။
• Remdesivir အသုံးပြုရန် မသင့်သော လူနာများ- ဆေးမတည့်လျှင်၊ကျောက်ကပ်အလွန်အမင်းပျက်စီးနေသူ (eGFR < 30), အသည်းအလွန်အမင်းပျက်စီးနေသူ (ALT, AS1 ≥ enzymes ပုံမှန်ထက် ၅ဆနှင့်အထက် များနေသူ)
COVID-19 လူနာအချို့သည် Tocilizumab ဆေးထိုးရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။
၆.၂.၆.Prophylaxis of venous-thromboembolism
• LMWH (Low Molecular- Weight Heparin) 0.4 mg (သို့) Unfractionated Heparin 5000 ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် အချို့လူနာများတွင်ထိုးပေးရန်လိုအပ်သည်။
၇. နိုးနေစဥ် မှောက်လျှက်နေနည်း (Awake Proning Guide)
•လူနာသည်နိုးနိုးကြားကြားရှိပြီး ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်း၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရမည်။
• မှောက်လျှက်အနေအထားကိုတစ်ကြိမ်လျှင် ၄နာရီကြာနေရမည်။
•အစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ အိမ်သာသွားခြင်း နှင့်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် အတွက် လူနာကို တစ်နာရီ အနားပေးပါ။
လူနာ ခေါင်းကို ဘယ်ဘက် (သို့) ညာဘက်လှည့်ပြီး အောက်စီဂျင် ပေးထားပါ။
1. ဦးခေါင်း အတွက် ပျော့ပျောင်း သော ခေါင်းအုံး သုံးပါ
2. ခေါင်းအုံး အပို နှစ်လုံးကို ရင်ဘတ်နှင့် တင်ပါးဆုံ အောက်တွင်ထားပါ
3. ညို့သကြီးအောက်တွင်ခေါင်းအုံး တစ်လုံးထားပါ
ဂရုပြုရန်: ဝမ်းဗိုက် ကိုဖိနေခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန်သတိထားပါ။ ဤအချက်သည် အဝလွန် လူနာ တွေအတွက် ပိုပြီး အရေးကြီး ပါတယ် ။
၈.၃. ခေါင်းအုံး တစ်ခုတည်း အသုံးပြုခြင်း
၉.COVID-19 Cases များတွင်မကူးစက်နိုင်သောရောဂါကုသမှု
- ဆရာ၀န်များ အနေဖြင့် လူနာ လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများလိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ဆက်ပေးခြင်း ပြောင်းလဲပေးခြင်းများ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ ACEI, metformin, statin adjustment according to liver and kidney function)
- COPD/ ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသောလူနာများအတွက်
လူနာများအတွက် Nebulizer ဟုခေါ်သည့် ဆေးအငွေ့ရှူခြင်း Prednisolone ပေးခြင်းများရှိနိုင်သည်။
o ပိုးရှိသော်လဲ ရောဂါလက္ခဏာ မပြသော လူများ (COVID-19 လူနာ နှင့်အတူနေ မိသားစု၀င်များ (သို့မဟုတ်) COVID-19 လူနာနှင့်ထိစပ်မှုရှိသူများ) ရောဂါအခြေအနေတည်ငြိမ်ပါက SGLT2 Inhibitors လွဲ၍ လူနာ အရင်ကသုံးနေသော ဆေးများကို ဆက်ပေးသင့်ပါသည်။ SGLT2 သောက်သုံးနေသော လူနာများ Dapagliflozin ဆေးကိုခဏရပ်ထားပါ။
o COVID 19 အပျော့စား နှင့် အလယ်အလတ် စား ကူးဆက်ခံရသူ၏ ရောဂါအခြေအနေတည်ငြိမ်ပါက SGLT2 Inhibitors နှင့် Metformin လွဲ၍ လူနာ အရင်ကသုံးနေသော ဆေးများကို ဆက်ပေးသင့်ပါသည်။
o ရောဂါပြင်းထန်လျှင် insulin ပေးသင့်ပါသည်။ Isolation rooms ၀င်ထွက်သည့် အကြိမ်ရေ လျှော့နဲစေရန် အလို့ဌာ Glargine/Mixtard insulin ကပို၍ သင့်လျှော်ပါသည်။
o အခြေအနေ ပိုဆိုးလာပါက Basal bolus regime ကို အသုံးပြုစေချင်ပါသည်။ သို့သော်လဲ ဆရာ၀န်များ အနေနှင့်မိမိတို့ အရပ်ဒေသ နှင့် ကိုက်ညီသော ဆေး၀ါးများကို သုံးနိုင်ပါသည်။ လူနာ ၏ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေ မကောင်းခြင်း (သို့မဟုတ) အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်ထဲ (ICU) တွင် ရောက်နေပါက GKI (Glucose potassium (K) insulin drip) အသုံးပြုစေချင်ပါသည်။
Sources: Management guidelines for COVID-19 (Ministry of Health, NUG), NHS, fighting with covid-19 pneumonia (Prone) KTPH